တရုတ်နိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကြား ပူးတွဲသုတေသန ဆောင်ရွက်ရေးစီမံကိန်းများ လျှေှာက်ထားနိုင်ခြင်း | Department of Research and Innovation : Ministry of Education (Science and Technology)
Home News / Events တရုတ်နိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကြား ပူးတွဲသုတေသန ဆောင်ရွက်ရေးစီမံကိန်းများ လျှေှာက်ထားနိုင်ခြင်း
Posted By: PlanetCreatoron: April 30, 2019 In: News / Events
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံတော်အဓိက သုတေသနလေ့လာရေးစီမံကိန်း၏ “အစိုးရကြား နိုင်ငံတကာ သိပ္ပံနည်းပညာ ဆန်းသစ်တီထွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု/ဟောင်ကောင်၊ မကာအို၊ ထိုင်ဝမ် သိပ္ပံနည်းပညာ ဆန်းသစ်တီထွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု” ဆိုင်ရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပထမအသုတ်စီမံကိန်း လျှောက်ထားမှု လမ်းညွှန်ချက် (http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj /gfxwj2019/201904/t20190423_146203.htm) အရ တရုတ်နိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကြား ပူးတွဲသုတေသန ဆောင်ရွက်ရေးစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တရုတ်-မြန်မာ သိပ္ပံနည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကော်မတီ ပထအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအား ရည်ညွှန်း၍
အောက်ပါကဏ္ဍများတွင် လျှောက်ထားနိုင်သည် –
• စိုက်ပျိုးရေး (Agriculture)
• သောက်သုံးရေလုံခြုံရေး (Water Safety)
• စွမ်းအင်သစ် (New Energy)
• သမားရိုးဆေးပညာ (Traditional Medicine)
• ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး (Environmental Protection)
• သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး (Disaster Relief)
• တိုင်းတာတွက်ချက်ရေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းစွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်မှု (Metrology and Standard Capacity Building)
ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့် ခန့်မှန်းခြေစီမံကိန်းအရေအတွက် – ၁၀ ခု
စုစုပေါင်း ထောက်ပံ့ပေးမည့်စရိတ်ပမာဏ – တရုတ်ငွေ သိန်း ၁၅၀ ယွမ်
လျှောက်ထားရာ၌ လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ
1. စီမံကိန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သည် မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ စီမံကိန်းစုစည်းရာဌာနသို့ စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြရမည်။ တစ်ဖက်တည်းမှ စီမံကိန်းတင်ပြမှုသည် အကျုံးမဝင်ပါ။
2. စီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူသည် အဆင့်မြင့်ရာထူး သို့မဟုတ် ပါရဂူဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။
3. စီမံကိန်းလျှောက်လွှာနှင့် ပူးတွဲစာများသည် သတ်မှတ်ထားသည့် format တောင်းဆိုချက် အရ ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ရမည်။
4. စီမံကိန်းလျှောက်ထားသည့်ဌာနသည် စီမံကိန်းတစ်ခုကို ထောက်ခံပေးသည့်ဌာန တစ်ခုမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားရမည်။ ဌာနများစွာမှ လျှောက်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ကြိမ်ဖန်များစွာ လျှောက်ထားခြင်း မပြုလုပ်ရ။ စီမံကိန်း ၁ ခုသာ လျှောက်ထားရန် ကန့်သတ်ထားသည်။
5. မြန်မာနိုင်ငံမှ ပူးတွဲလျှောက်ထားသူသည် လျှောက်လွှာကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန သို့ (၂၈-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပေးပို့ရမည်။
6. မြန်မာဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ – ဒေါက်တာသီသီစိုး၊
Email – thithisoe81@gmail.com၊ ဖုန်းနံပါတ် – 09-444047198
၁။ လျှောက်လွှာပုံစံ (Joint Project Proposal)
၂။ လျှောက်ထားသူ၏ အကြီးအကဲ ထောက်ခံစာ (Recommendation Letter)
၃။ ပူးတွဲလျှောက်ထားမည့် တဖက်အဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအကဲ ထောက်ခံစာ (Recommendation Letter)
၄။ နှစ်ဦးသဘောတူညီချက် (Consent Letter)
FORMAT FOR SUBMISSION OF PROPOSAL (TO BE FILLED BY APPLICANT)